राति देखि चितुवा र कुकुर एकै शौचालयमा फसे, बिहान जे भयो सबै चकित परे ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारराति देखि चितुवा र कुकुर एकै शौचालयमा फसे, बिहान जे भयो सबै चकित परे !
February 5, 2021 admin समाचार 869
घटना भारत कर्नाटक दक्षिण कन्नडको हो। त्यहाँ एक शौचालयमा चितुवासँगै एक कुकुर थुनिएको थियो। कयौं घण्टा पछि पनि उक्त कुकुर त्यहाँबाट सकुशल निस्किन सफल भयो। सामाजिक संजालमा अहिले उक्त कुकुर र चितुवाको तस्विर भाइरल भइरहेको छ।
भारतीय वन अधिकारी प्रवीण कासवानले ट्वीटरमा एक तस्विर राखेका छन्। तस्विरमा एक चितुवा र कुकुर देखिन्छन्। कासवानका अनुसार उक्त कुकुर र चितुवा कयौं घण्टा देखि उक्त शौचालयमा थिए।
बताइएअनुसार राति कुकुरको पछि-पछि आएर चितुवा रातभर त्यहिँ बसेको थियो। बिहान घरकी एक महिलाले शौचालयमा कुकुर र चितुवा देखिपछि प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन्। त्यसपश्चात प्रहरीले भारतीय वन विभागमा खबर गरेको थियो।
भारतीय वन विभागका अधिकारीहरु त्यहाँ पुगेर शौचालयको छत हटाएर चितुवालाई त्यहाँबाट उद्धार गरेका थिए। चितुवालाई त्यहाँबाट हटाउने अधिकारीहरुपनि कुकुरलाई चितुवाले किन आक्रमण गरेन भने अचम्मित छन्।
February 13, 2021 admin समाचार 2825
अति नै मार्मिक कथा मन थामेर नरोई पढ्नुहोला ! अरुलाई पनि पढ्ने मौका दिनुहोला भिडियो स्मच्र्को अन्तिममा राखिएको छ पुरा समाचार पढ्नु होला _ एक सुन्दर जोडि थिए ! केटा र केटि धेरै बर्ष माया
November 27, 2020 admin समाचार 7155
February 1, 2021 admin समाचार 8758
LEX 18 agenda conversation: Job club (404331)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (378956)
Hello world! (314435)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (289194)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (104946)